Nhau - Shandong Giant pombi indasitiri kusimbisa midziyo utariri, kuona yakagadzikana kugadzirwa
Shandong Jute Pipe Factory yakasimba kusimbisa pfungwa ye "yakapfava kugadzirwa, midziyo kutanga", kuomerera kune "kushanda kwechokwadi" seyakanyanya, midziyo "zero kukanganisa" sechinangwa, kusimudzira kutungamira kweTPM kwevashandi vese, kuvandudza mwero we manejimendi emidziyo, ive nechokwadi chekushanda kwemidziyo kunyatsoita, kuvandudza kugona kwekutsigira kwemidziyo.
Iyo fekitori inoronga kare kubva pakuvandudzwa kwenyika, kudzoreredza chaiko, masevhisi ehunyanzvi, kubatanidzwa kwemidziyo yekugadzira uye zvimwe zvinhu, zvinobudirira kuvandudza kurongeka kwemidziyo, kunatsiridza kugona kwevimbiso.Nekuvandudza kurongeka uye kuoma kwemidziyo, basa uye nemazvo. midziyo yakakosha senge chigayo, rolling muchina uye live sleeve inogona kuvandudzwa, uye kudzivirira chizvarwa chehurema hwakadai seplate shape, roll shape, indentation uye yekune dzimwe nyika compression.Kuburikidza neiyo hydraulic system shanduko uye optimization, kuderedza kudonha kwemidziyo, ramba uchivandudza nharaunda yesaiti, kuderedza kushandiswa kwesimba, uye kugadzirisa kugadzikana kwekugadzira.
Pahwaro hwekupfupisa iyo yapfuura midziyo manejimendi basa, fekitori inosimudzira zvizere TPM yakazara midziyo manejimendi sisitimu ye "operation point inspection, nyanzvi yekuongorora nzvimbo, precision point inspection", uye nerubatsiro rwe "TPM information system, defect input system, midziyo yemhando yepamusoro inoshanda precision manejimendi system" uye mamwe mapuratifomu eruzivo kuti avandudze kushanda kwenzvimbo yekuongorora.Ne "point inspection completion rate, point inspection arrival rate, point inspection hit rate" uye zvimwe zviratidzo sekutanga, kusimudzira kuvandudzwa kwenzvimbo. kuongororwa kwemhando, kuderedza chiyero chekutadza kwemidziyo uye kuvandudza chiyero chekushanda sechinangwa, kuvandudza hurongwa hwekugadzirisa midziyo, zviyero, yakanaka yekuongorora nzvimbo yekuongorora pre-kugadzirisa.Panguva imwe chete, tora kushanda kwakarurama kwekugadzirisa kwekugadzirisa michina sekubudirira. poindi, simbisa iyo yakanangwa mutsara wekushandisa manejimendi, ramba uchiita roll changeng nguva uye kugadzirisa modhi optimization, uye kuvandudza kushanda kwekushandisa manejimendi.
Kuti uderedze mutengo wezvisaririra, fekitori inotora matanho akati wandei mumidziyo yakasara uye manejimendi ekuteya zvinokwanisika uye kuwedzera kushanda zvakanaka.Tora yakaonda midziyo manejimendi senzvimbo yekubudirira, wedzera kugadzirisa kudzivirira kwemidziyo uye kugadzirisa kutenderera manejimendi, ita shuwa. kushanda kwakagadzikana kwemidziyo, uye kuwedzera zvine musoro hupenyu hwebasa rezvimedu.Kushandisa zvine musoro kwezvipo zvezvipo kuburikidza nezviyero zvakaita sekuchengetedza uye kushandura, kuenzanisa chiziviso uye hurongwa hwekutsvagisa kwezvimedu, kunatsa manejimendi ezvimedu zviri parutivi. warehouse, dzivirira kudzokororwa kuzivisa kana kurasikirwa kusingakoshi kwezvikamu zvakasara, gadzirisa iyo hesitori chimiro, uye ive nechokwadi chesainzi uye chine musoro hesera.
Nguva yekutumira: Kubvumbi-07-2022